Orinasa mpanamboatra Collagen Fish Fish | Yasin
ITEM izay anjara-fanompoana STANDARD Fitsapana
Powder na granula fanamiana, malefaka, tsy misy moka
Tsy misy fofona
Vahaolana aqueous 10%, 25 ℃
Fametrahana dity (g / ml)
(anton-javatra fanovana 5.79)
Tabilao mikoriana ho an'ny famokarana trondro collagen
Ny kolagen-trondro dia azon'ny vatan'olombelona miditra, mandray anjara amin'ny hetsika ara-batana isan-karazany, ary mitana andraikitra manemotra ny fahanterana, manatsara ny hoditra, miaro ny taolana sy ny tonon-taolana ary manatsara ny tsimatimanota.
Miaraka amin'ny fiarovana avo lenta amin'ny akora, ny fahadiovan'ny proteinina ary ny tsiro tsara, ny collagen trondro dia be mpampiasa amin'ny indostria maro, toy ny famenon-tsakafo, vokatra fikarakarana ara-pahasalamana, kosmetika, sakafon-biby, fanafody, sns.
Fish Collagen Peptide dia nohararaotin'ny fizotran'ny hydrolysis anzimazy manapotika ny molekiola ary mitondra ny lanjan'ny molekiola eo ho eo amin'ny 3000Da ary noho izany dia afaka mandray mora ny vatan'olombelona. Ny fihinanana collagen trondro isan'andro dia voaporofo fa mandray anjara betsaka amin'ny hoditry ny olombelona amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fizotry ny fahanterana.
2, Vokatra fitsaboana ara-pahasalamana
Zava-dehibe amin'ny vatan'olombelona ny collagen, ao anatin'izany ny taolana, hozatra, hoditra, tendon, sns. Ka io dia azo ampiasaina amin'ny vokatra fikarakarana ara-pahasalamana hananganana ny vatan'olombelona.
Ny fizotry ny fahanteran'ny hoditra dia ny fihenan'ny collagen. Ny collagen trondro dia matetika ampiasaina amin'ny kosmetika mba hampihenana ny fizotran'ny fahanterana.
Ny fianjeran'ny collagen amin'ny ankapobeny dia antony lehibe mahatonga ny aretina mahafaty. Amin'ny maha collagen lehibe azy dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny pharmaceutika koa ny collagen trondro.
Collagen trondro tsara indrindra
Collagen mizana amin'ny trondro
Hydrolyzed Collagen trondro